Isiqinisekiso kunye neBhaso
Ibhetri Pack ngesicelo
Umthengi Izinto zeBattery
Ukugcina amandla ibhetri
Isixhobo sebhetri yamandla
Ukutshintsha ibhetri ye-Lead acid
Ibhetri yokukhanyisa ilanga
Iphakethe yebhetri yeLi-Ion
Ipakethe ye-3.7V Li-Ion
Ipakethe ye-7.4V ye-Li-Ion
Ipakethe ye-11.1V Li-Ion
14.8V ipakethe ye-Li-Ion
Ipakethe ye-18.5V Li-Ion
Ipakethe ye-36V ye-Li-Ion
Ipakethe ye-48V Li-Ion
Ipakethe ye-60V ye-Li-Ion
Ipakethe ye-72V ye-Li-Ion
INDLELA YOKUPHILA YOKUHLAWULWA KWEBATTERO4
Ipakethe ye-3.2V LiFePO4
Ipakethe ye-6.4V LiFePO4
Ipakethe ye-9.6V LiFePO4
Ipakethi ye-12V LiFePO4
Ipakethe ye-24V LiFePO4
Ipakethe ye-36V LiFePO4
Ipakethe ye-48V LiFePO4
Ipakethe ye-60V LiFePO4
Ipakethe ye72V LiFePO4
3.2V LiFePO4 Iseli
3.7V iLi-Ion Iseli
Oonobangela bokupakisha iipakethi zebhetri ye-lithium kunye neendlela zokulungisa
Oonobangela bokupakisha iipakethi zebhetri ye-lithium yebhetri 1. Ingxaki yenqanaba lokuvelisa leepakethe zebhetri ye-lithium, ukutyabeka kwe-electrode akufani, kwaye inkqubo yokuvelisa inzima; 2. Impendulo yesiphaluka enobundlobongela ivelisa ubushushu obuninzi, obudala umbane ...
Yeyiphi imisebenzi engalunganga yeebhetri ze-lithium zebhetri?
Ibhetri yePolymer yenye yeebhetri zamandla eziqhelekileyo, kodwa xa usenza ibhetri yepolymer, iya kukuxelela nokusebenza okungalunganga kwebhetri ye-lithium yebhetri. Le ndlela yokusebenza ilandelayo ayilunganga. 1. Ifilimu ye-aluminium-yeplastikhi ebusweni bebhetri yepolymer ayinakubakho maliciousl ...
Ungazikhetha njani iibhetri ze-e-cigarette?
Uphando lufumanise ukuba iipesenti ezingama-80 zeengozi zazinxulumene nokusilela kwebhetri yecuba, ingakumbi xa ibhetri ibiza. Ngokwengxelo ekhutshwe yiNkonzo yoMlilo yaseMelika, uninzi lwemililo kunye nokudubula okubangelwa yi-e-cigarettes kunxulumene neebhetri ze-e-cigarette. Ke ngoko, ...
Zeziphi iindlela zokulungisa zeebhetri ze-18650
Okwangoku, uninzi lweebhetri ze-lithium ezisetyenziswa kwizixhobo ezininzi ezincinci ziibhetri ze-18650, zikhokelela kukhuphiswano olunamandla. Ukusebenza kweebhetri ze-lithium eziveliswa ngabanye abavelisi akulunganga kakhulu, kwaye bahlala bejongana nokusilela kwezixhobo. Ke zithini iindlela zokubuyisa i-18650 lithi ...
Iimfuno zokhuseleko lwe-E-cigarette
Ngokuthandwa kwetekhnoloji ye-nicotine yetyuwa, ishishini lenkonzo ye-e-cigarette sele iza kuba nenqanaba eliphezulu lophuhliso kwitekhnoloji yecuba encinci. Idume kakhulu kwimakethi yangoku Ukongeza kuphuculo lobuchwephesha be-atomization, abathengisi bamandla kwezixhobo bane-cha ...
Uyenza njani kwaye ugcine ibhetri ye-lithium-ion yesibane selanga ngokuchanekileyo?
Iibhetri zeLithium-ion zezibane zelanga ziya zisiba sithandwa ziindlela zonke zobomi zokonga umbane, ukungangcolisi umoya okucocekileyo, okukhuselekileyo kunye nezinto ezintle. Ukuba ufuna ukuphuhlisa izibane zelanga ezinokusetyenziselwa umsebenzi oqhelekileyo, iibhetri ze-lithium-ion kufuneka zigcinwe kakuhle. Ngexesha lofakelo ...
Xa kuthelekiswa neebhetri zelothe-asidi, zithini izibonelelo zebhetri yesitalato yelithium?
● ILithium incinci ngokomlinganiselo, inobunzima bokukhanya, kwaye kulula ukuyihambisa. Xa kuthelekiswa nenkqubo yokugcina amandla ebhetri ye-lithium kunye netekhnoloji ye-gel yebhetri ekhokelayo esetyenziswa kuyilo lwesibane selanga ngamandla afanayo, ubunzima bumalunga nesinye kwisithathu kwaye ubungakanani bomzimba bumalunga nesinye kwisithathu. Ngokwale nto ...
Yintoni ibhetri ye-lithium yebhetri kwaye ziziphi izibonelelo zayo?
Ibhetri ye-lithium Polymer ikwabizwa ngokuba yibhetri ye-lithium ibhetri: Xa kuthelekiswa neebhetri zangaphambili, ibhetri yeekhemikhali enamandla amakhulu, ubungakanani obuncinci kunye nobunzima bokukhanya. Ngokwendlela emile ngayo, iibhetri ze-lithium ze-lithium zineempawu ze-ultra-thin, kwaye zinokwenziwa ngeebhetri zeemilo ezithile ...
Yeyiphi indlela echanekileyo yokutshaja yeebhetri ze-lithium?
1. Ukutshaja Uluhlu olusebenzayo lwevolthi yebhetri ye-lithium yi-2.8 ~ 4.2V, isezantsi okanye ngaphezulu kunolu luhlu lwee-voltage, ii-lithium ion kwibhetri ziye zingazinzi kakhulu, kwaye zibangele neengozi. Ukuqinisekisa ukuba ibhetri ikuluhlu olukhuselekileyo, itshaja ekhethekileyo iyafuneka. Ezi tshaja ...
Indlela echanekileyo yokugcina ibhetri ye-lithium
Imigaqo ngokubanzi ekufuneka ilandelwe xa usebenzisa iibhetri ze-lithium zihlawuliswa nzulu kwaye zikhupha nzulu, Oko kukuthi, ukutshaja ibhetri ye-lithium ngexesha, musa ukulinda ukuba ibhetri iphele kwaye iphinde igcwalise kwakhona, eyingozi kubomi bebhetri. Iibhetri zeLithium Ukongeza ...
I-SOSLLI ineenkqubo zokumiliselwa kwebhetri eziphambili, ikhabethe eligugileyo, isixhobo sovavanyo lwe-BMS, i-100v izixhobo zokuvavanywa kwepakethe ye-li-ion enkulu, umatshini wokuzenzekelayo, umatshini wokucoca ulwelo ngokuzenzekelayo kunye neziko lokuvavanya.
60v Ibhetri Pack, Ibhetri yeLi-Polymer, I-3.6v yeLithium Ion Ibhetri yePakethi, Iphakethe yebhetri engama-60v, Isilinda seLi-Ion Ibhetri, Iphakethe yebhetri yeLithium engama-60v,
3 / F, iBldg. Indawo yaseShishini iTongfeng, No. 29 Longwan Market Rd., Isitalato iKengzi, Isithili esitsha sasePingshan, eShenzhen, China 518122